Tag: optimization | Martech Zone
Vhidhiyo: Yemunharaunda Kutsvaga Maitiro akakosha kune Makuru Makuru
Chishanu, May 11, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Chinyorwa chazvino chatakaita pa6 Keyword Misconceptions dzakataura nepfungwa dzisiridzo dzekuti mabhizimusi emunyika kana epasi rese anofanirwa kudzivirira kutsvaga kwemuno. Haisi chete yekufungidzira zvisizvo, iko kukanganisa kukuru. Kuvandudza zano reSEO rinokuisa mudunhu kunogona kushomeka zvakanyanya, kunoda zviwanikwa zvishoma, uye kuwedzera kudzoka kwako kwese. Uye hazvibvise iwe chinzvimbo pane asiri-geographic makiyi kana mitsara. Zvakapesana, chinzvimbo mushe munharaunda chinogona kutyaira chinzvimbo chako munyika nepasirese.
Kugadzira pamwe nekopiraiti
Chitatu, July 9, 2008 Chitatu, July 9, 2008 Douglas Karr
Uku ndiko, pamwe, imwe yehurukuro dzakanakisa dzekuti mitemo yekopiraiti (IMO) haisi yekungoita zvisirizvo, asi zvakare ine bane kune kugona kwetsika yedu. Kurwadziwa kunokonzerwa nemitemo iyi kunowedzerwa nekuputika kwemukana watinowana neInternet. Kunyangwe chinotapira ndechekuti meseji uye nhoroondo zviri kukurukurwa pano naLarry Lessig, gweta. Hat tip kuna Lorraine wekuwana!
Wednesday, July 9, 2008 Wednesday, July 9, 2008
Chii chinonzi Yooba?
China, Kukadzi 14, 2008 Douglas Karr
Ndichangowana katsamba kubva kune anotaurirana (zita hombe) kuYooba.com, webhu-based sevhisi iri kugadzirira kuvhura iyi Chitubu. Vhidhiyo yacho yakahwanda zvishoma asi zvirimo pane ino saiti zvinomanikidza: Yooba ndeye webhu inoenderana neB2B sevhisi yekushambadzira nyanzvi. Chinangwa chedu ndechekuita kuti zvikwanisike kuti iwe utarise kune kugona uye kubudirira. Yooba inokupa iyo yese-inosanganisira chikuva cheako dhijitari kushambadzira ruzivo. Isu tinopa kubata uye dhatabhesi